It is me. Ko Niknayman.: တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့အိုလံပစ်ကို ဘာကြောင့် သပိတ်မှောက်သင့်သလဲ။
တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့အိုလံပစ်ကို ဘာကြောင့် သပိတ်မှောက်သင့်သလဲ။
တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရသည် အာဏာရှင်ကြီးပီပီ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရောဆိုသလို မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်းစစ်အာဏာရူးလူမိုက်တစ်စုတို့ အားသွေးထိုးမြှောက်ပင့်ပြီး ပြည်သူနှင့် ဘာသာတရားကိုစောင့်ရှောက်ပေး နေသော မြန်မာရဟန်းတော်များအား နအဖမှ ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်ခြင်းများကို အကာအကွယ်ပေး နေခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရအား ချော့မော့သိမ်းသွင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက် အောင်နအဖအား ဖြောင်းဖြရန်တောင်းဆိုကြိုးပမ်းခြင်းသည် သဲထဲရေသွန်သကဲ့သို့ အရာထင်လိမ့်မည်မဟုတ် ချေ။ တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ နအဖအားကာကွယ်ပေးနေမှုကိုကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပြုလုပ်နေသ၍ တရုတ်အာ ဏာရှင်အစိုးရအား ဆန့် ကျင်ကန့်ကွက်နေသင့်ပါသည်။
အောက်ပါအချက်များသည်တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရ၏နအဖစစ်အာဏာရှင်တို့ အားအကာကွယ်ပြုမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုများထဲမှ အချို့ သာဖြစ်သည်။
တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရသည် စစ်လက်နက်များပစ္စည်းများအား ၁၉၈၈ မှ ၂၀၀၆ ခုထိ နအဖ စစ်အာဏာ ရှင်များ သို့ရောင်းချပံ့ပိုး ခဲ့သည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက် ၂၀၀၇ တွင်တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ ကုလသမ္မဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဗီတိုအာဏာ သုံး ပြီး နအဖ အာဏာရှင်အား အကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇ ခု ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်း မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သော်လည်း၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် မြန်မာပြည်မှ ပထမအကြိမ်ပြန်ရောက်ပြီး တံခါး ဖွင့်အစည်းဝေးပွဲတွင်မြန်မာနိုင်ငံရေးသည်မည်သူနှင့်မှမဆိုင်၊ ဘာမှလုပ်စရာမလို၊ မြန်မာပြည်သူများသည်၎င်း တို့ ကံကြံမ္မာ ၄င်းတို့ ဘာသာဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟု ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မျက်နှာထားတင်တင်းဖြင့် နအဖ အား အကာအကွယ်ပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်းတို့ တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကာကွယ်မှု ဖြင့် နဖအမှ မြန်မာပြည်တွင်း ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများကို သတ်ဖြတ်နှိပ်ကွပ်ခြင်းအား မည်သူမျှဝင် ရောက်ဖြန်ဖြေစရာ မလိုဟု၎င်းတို့ ၏ ရက်စက်သောစိတ်သဘောထားကို ရှင်းလင်းစွာပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီဝင်အဖွဲ့(၁၅) နိုင်ငံ၏ ကြေညာချက်ထဲတွင် တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှစိတ်မပါစွာဖြင့် ပါဝင် ခဲ့သော်လည်း မကြာခင်မှာပင်လျှင် မြန်မာပြည်အရေးသည် ပြည်တွင်းနိုင်ငံ၏အရေးသာဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံ တကာမှ ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်သင့်ဟု ထပ်မံ ပြောလာပြန်သည်။
မဆလခေတ်၊ န၀တခေတ်၊ ယခု နအဖခောတ်အဆက်ဆက်တိုင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် တရုတ်အာဏာရှင် အစိုးရသည် မြန်မာအာဏာရှင်များအား ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ထောက်ခံအားပေးရုံသာမက စစ်အာဏာရှင် အင်အားတိုးမြင့်စေရန်အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စစ်ရေးအင်အားများအား ထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ သောနအဖစ်အုပ်စု၏အမာခံကျောထောက်နောက်ခံဖြစ်သည့်တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရအားပျော့ ပြောင်း သောနည်းများဖြင့် အတန်တန် ချဉ်းကပ်ကြိုးစားကာ မေတ္တာရပ်ခံလာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားသော အ ချိန်ကာလထဲမှ ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်အရေး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးအတွင်း ရောက် ရှိစေရန် ကြိုးစားခဲ့မှုတိုင်းတွင် တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်မှာ အကြိမ် ပေါင်း မြောက်မြားစွာဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင် လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်းသို့မြန်မာပြည်ကိစ္စဆွေးနွေးရန် ရောက် ရှိလာခဲ့ချိန်တွင်လည်း တရုတ်မှ မြန်မာပြည်လူထုထပ်မံဒုက္ခရောက်စေရန် အတွက် နအဖအား အားပေး သည့်အနေဖြင့် ဗီတိုအာဏာအား ဂရုဏာကင်းမဲ့စွာ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၄င်းကဲ့သို့တရုတ်အာဏာရှင် အစိုးရမှ ဗီ တိုအာဏာဖြင့် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကူညီခဲ့မှုကြောင့် နအဖမှာ မကြာခင်က စက်တင်ဘာလ ရွှေဝါ ရောင်အရေးတော်ပုံကြီးတွင် ရဟန်းဘုန်းကြီးများကိုပင်လျှင် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်သည်အထိ ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်ဆောင်ပြလာခြင်းဖြစ်သည်။
တကမ္ဘာလုံးမှ ပြည်သူများမျက်မှောက်ရောက်ရှိစေခဲ့သည့် နအဖ၏ မိုက်ရိုင်းမှုကြီး မဖုံးနိုင် မဖိနိုင် ဖြစ်လာ သောအခါတွင်၎င်း၊ နီးကပ်လာပြီဖြစ်သော ၄င်း၏ အိုလံပစ်ပွဲတော်အကျိုးစီးပွားအား ကာကွယ်ရန်အတွက်လို အပ်လာသောအခါတွင်၎င်း တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရသည် အခြားသော ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဝင်များ အကြားတွင် အရေးကြီးစွာကိုင်တွယ်လို့ မရနိုင်သေးသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ဟန်မပျက် မျောလိုက်ကာမကန့်ကွက်ဘဲ ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သူတို့ အပေါ် သနားညှာတာခြင်းကြောင့် ပါလာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကို သိသာထင်ရှားစေ သည့်အချက်မှာ ယခုထိတိုင် ပြောကြားနေသော မြန်မာပြည်အရေးသည် ပြည်တွင်းရေးသက်သက်သာ ဖြစ်သည်ထု အကြိမ်ကြိမ် ဆက်လက်ပြောဆိုပြနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရအား မြန်မာပြည်အရေး မြန်မာပြည်သူများအပေါ် ဂရုဏာသက်နိုးဖြင့် မျှော်လင့်စောင့်စားကာ အချော့နည်းဖြင့် ဆက်လက်ကြိုးစားနေပါလျှင်၊ နောက်တစ်ကြိမ် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးများတွင် တရုတ် အာဏာရှင်အစိုးရမှ ကန့် ကွက်ဗီတိုအာဏာအား လွယ်လွယ်ကူကူဖြင့် ဆက်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ သို့ သောသုံးသပ်ချက်များအရတရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရအား အခြားသောနိုင်ငံတကာအင်အားစုများပြည် သူ များနှုင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲကာ ၄င်း၏အကျိုးစီးပွားများအား နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများအရ ဆန့် ကျင်သွားပြ ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ နဖအနှင့်အမာခံအပေါင်းအပါများအား ရသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဆန့် ကျင် သွားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာပြည်သူလူထုမှ နအဖအာဏာရှင်အား တိုက်ရိုက်တော်လှန်နေချိန်တွင် ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများမှလည်း တာဝန်ခွဲတစ်ရပ်အနေဖြင့် နအဖအားထောက်ပံ့ပေးနေသည့် အင်အားများအားဟန့်တား မှသာလျှင် အတွင်းအပြင်ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုဖြင့် နအဖပြုတ်ကျရေးအတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင် ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်မှလည်း ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တရုတ်အာဏာရှငိအစိုးရအား ၄င်းတို့ အ ကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုနှင့် မြန်မာပြည်သူတို့ အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုအား နိုင်ငံတကာမျက်နှာအလယ်တွင် မီးမောင်း ထိုး နှိုင်းယှဉ်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ ကျင်းပမည့် ၂၀၀၈ခုနှစ် အိုလံပစ်သည် တရုတ်ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအား တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ ၄င်းတို့ လက်အောက်တွင် ဖိနှိပ်ထားသော ဘ၀ဆိုးများအပေါ် ခြေဖြင့်နင်းကာ ၄င်း တို့ အာဏာရှင်အစိုးရအတွက် နိုင်ငံရေးအမြတ်ရရန်သာ ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော တီရမ်နမ်မင်ရင်ပြင်သွေးချောင်းစီးပွဲအားသမိုင်းတွင် မေ့ပျောက်စေရန်ယခုကဲ့သို့ သောဆောင် ရွက်မှုများဖြင့် ဖုံးကွယ်လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်အရေးသည် တရုပ်အိုလံပစ်နှင့်မဆိုင်၊ အိုလံပစ်အားသပိတ်မှောက်လျှင် တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရမှ ၄င်းတို့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်ခြင်းကြောင့် နာကျဉ်းနိုင်ကာ မြန်မာပြည်အရေးတွင် ပိုမိုဂရုဏာသက်မည် မဟုတ်ဟု ထင်ကာ စိုးရိမ်ပူပန်နေမှုသည် အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရ၏ တောက်လျှောက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သော မြန်မာပြည်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုံးဝဂရုဏာသက်မှု မရှိခဲ့ခြင်း၊ ယခုတိုင် ဂရုဏာသက်သည့်စကား ပြောကြားနေမှု မရှိခြင်း၊ နအဖအား ယခင်ကကဲ့သို ပင့် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေခြင်းတို့ကနောင်အနာဂတ်တွင် လွယ်လွယ်ကူကူ စိတ်ပြောင်းကာ ဂရုဏာသက်မည့် အ လားအလာမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပေသည်။ တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရအား ပြော့ပြောင်း သောနည်းများဖြင့် ကျင့်သုံးခဲ့သည့်ရလဒ်က တရုတ်အာဏာရှင်အား စိတ်ထားမပြောင်းစေရန် ပံ့ပိုးထား ပေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် နအဖ၏ နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာ ကျောထောက်နောက်ခံအားပေးနေသည့် တရုတ်အာ ဏာရှင်အစိုးရအား ပိုမိုထိရောက်သောနည်းများဖြင့် ဆန့် ကျင်သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာပြည်သူတို့ မှ နအဖအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့် ကျင့်နေသကဲ့သို့ပြည်ပရှိ မြန်မာများမှလည်း နအဖ၏လက်ပါးစေဆရာကြီး တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရအား ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့် ကျင်သွားရန် လိုအပ်ပေသည်။
Posted by Ko Niknayman at 10:38 PM